ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘဝအတေွ့အကြုံ ! ညီမကိုယ်ဝန်ရှိမှန်းသိသိချင်း Folic acid သံဓါတ်အားဆေးကိုတစ်နေ့တစ်လုံးပုံမှန်သောက်ပါတယ် OG ကတော့ကိုယ်ဝန်သုံးလလောက်မှာပဲစအ...
Posted by Phÿőe thîrï July 11, 2018
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘဝအတေွ့အကြုံ ! ညီမကိုယ်ဝန်ရှိမှန်းသိသိချင်း Folic acid သံဓါတ်အားဆေးကိုတစ်နေ့တစ်လုံးပုံမှန်သောက်ပါတယ် OG ကတော့ကိုယ်ဝန်သုံးလလောက်မှာပဲစအပ်ဖြစ်ပါတယ် မိခင်ကျန်းမာရေးနဲ့သန္ဓေသားကျန်းမာရေသိရအောင် ဆီး သေွး အကုန်စစ်ခိုင်းပါတယ် ဆီးလမ်းကြောင်းမှာပိုးရှိရင်သန္ဓေသားဆီကူးနိူင်တာမို့ပါ နောက်ပြီးကလေးအနေထားမှန်မမှန်သိရအောင် Ultrasound ရိုက်ရပါတယ် ဘာလေးလဲဆိုတာမသိရသေးတော့ ကိုယ်ဝန်၆လမှာအရမ်းသိချင်တာကြောင့်ထပ်ရိုက်သားသားလေးဆိုတာသိရတော့ကလေးအဖေဆိုတာပြုံးပျော်လို့ မေမေတို့လဲ ဗိုက်ထဲကဘေဘီလေးက ဘာလေးလဲသိချင်ရင် ၆လပြည့်ပြီးမှရိုက်ရင်ပိုသေချာပါတယ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဝမ်းချုပ်တတ်တာမို့ အသီးအနှံနဲ့ရေများများသောက်ပေးနော် ညီမကတော့ နွားနို့စစ်စစ်ကိုနေ့တိုင်းသောက်ဖြစ်တယ် တစ်ချို့ဆို ကိုယ်ဝန်နဲ့အပူအစပ်ကလွဲလို့အကုန်စားလို့ပြောပေမဲ့ ညီမကတော့ သားသားမေွးရင်လေရောဂါပါမှာစိုးလို့ လေထမဲ့အစားစာဆိုရေှာင်ခဲ့ပါတယ် နောက်ပြီး
ညီမတို့နားမှာ ကိုယ်ဝန်နဲ့တုန်းကအချိုရည်တေွသောက်လို့ ကလေးမှာရင်ကြပ်ရောဂါပါလာတာတေွ့ဖူးတော့ အချိုရည်ဆိုလုံးဝကိုမသောက်ဘဲနေပါတယ်
ကိုယ်ဝန်စလွယ်ကတည်းကအစားသောက်မပျက်ခဲ့သလို အန်လဲမအန်ခဲ့ပါဘူး တစ်လတစ်ခါပုံမှန်ogနဲ့ပြဖြစ်ပါတယ် မေွးခါနီးကျမှ နှစ်ပါတ်တစ်ခါ ပြောင်းပြရပါတယ် သားသားကိုခွဲမေွးထားတာပါ ခုမှသားဦးမို့ အန္တရာယ်ရှိနေမှာစိုးလို့ခွဲမေွးလိုက်တာပါ ကိုယ့်ကလဲလူကောင်ကခပ်သေးသေးလေ ဆေးရုံးမှာ ၅ရက်လောက်ပဲနေခဲ့ရပါတယ် လူကြီးရော ကလေးပါကျန်းမာရေးကောင်းလို့ ဆေးရုံးမဆင်းခင်တော့အိမ်ရောက်ရင်သားသားကိုမကိုင်တွယ်တတ်မှတေွးပြီးစိတ်ပူမိတာ
အနှီးထုပ်တာကအစ အကူခေါ်ထားတဲ့ Nurse ဆီကနေကြည့်ထားရတယ် ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့သားသားကမေွးစကတည်းကနေ့နဲ့ညလုံးဝမမှားခဲ့တာ အော်မေမေတို့ရေမေ့တော့မလို့ ကိုယ်ဝန် ၃လကစပြီး OG က Fenza ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးသောက်ခိုင်းပါတယ် အဲ့ဆေးကိုသားသား၆လအထိသောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 😍😍😍
သားသားလေးကိုဆောင်းတွင်းမေွးတာမို့ရေကိုနေ့တိုင်းမချိုးပေးပါဘူး၁ပါတ်ကို၃ရက်ပဲချိုးပေးတာပါ ရက်သားလေးပဲရှိသေးတာမို့ ဂွမ်းစလေးနဲ့ပဲသန့်ရှင်းရေလုပ်ပေးတတ်ပါတယ် သားသားလေးမေွးစကတည်းကနေခုထိဖျားတာနာတာမရှိအောင်သေချာဂရုစိုက်တယ် ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခါမှာပဲဆေးရှိန်ကြောင့်နည်းနည်းပါးပါးပဲကိုယ်ပူတာဖြစ်တယ်
သားသား ငယ်ငယ်ကဝတုတ်ကလေးမို့ ဆရာမတေွက၆လပြည့်မှဖြည့်စွတ်စာကျေှးခိုင်းပေမဲ့ ညီမကတော့၅လကျော်မှာ Gerberကထုတ်တဲ့ဆန်မှုန့်လေးစကျေှးဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြီး ကိုယ့်ခံအားကောင်းပြီးဖျားတာနာတာမဖြစ်အောင် baby vit အားဆေးတစ်နေ့တစ်ကြိမ်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်
သားသားက ၄လမှာ စမေှာက်တတ်ပါတယ်
အရေှ့ကိုသွားရင်နောက်ပဲရောက်ရောက်သွားတတ်တယ် သူ့ကိုကိုင်းပေးထားရင် ၄လကတည်းကလမ်းလေှျာက်နေပါပြီ ၄လကနေ၆လအထိကတော့ပတ်လက်ကနေမေှာက်လိုက်လှန်လိုက်နဲ့အရမ်းဆော့ ရလပြည့်ကနီးကျမှ ထိုင်လဲထိုင်နိူင်သလို ဝမ်းယားတိုးပါသွားတတ်နေပါပြီး ခု၈လကျသူ့မှာသာမတ်တပ်စမ်းရပ်ချင်နေသလိုမျိုးစလုပ်ပါတယ် ခုဆိုသူ့ကတော်တော်လေးကိုလည်နေပြီး ဖုန်းသံကြားတာနဲ့သူ့ကအရင်ကိုင်းချင်လို့ဝှက်ထားရတယ် 😁 ဖုန်းပြောရင်လဲ လိုက်နားထောင်ပြီး တအားအားနဲ့လိုက်ပြောတတ်သေး
ကလေးတစ်ယောက်နဲ့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ထိအချိန်ကုန်မှန်းမသိ တစ်နေ့တာကိုကုန်ဆုံးသွားတယ် ထမင်းစားတောင်အရသာခံပြီးမစားရတာအတော်ကြာပြီး ကလေးအိပ်တုန်း လုပ်စရာရှိတာလုပ် အလုပ်တေွှပီးလို့နားမယ်ရှိသေး သားသားကနိုးသွားလို့ဆက်ထိန်းရသေး ရေချိုးချင်တာ ရေအိမ်ဝင်ချင်တာဆို ကလေးကြည့်ပေးမဲ့သူရှိရင်ရှိ မရှိတဲ့အခါ သူ့တို့လေးတေွအိပ်မှာပဲလုပ်ဖြစ်တယ် ကိုယ့်အပြင်စျေးဝယ်ထွက်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်တော့ပဲ သူ့တို့လေးတေွအတွက်ပဲဝယ်မိတယ် တစ်ခါတစ်လေ နို့စို့ရင်ကိုယ့်မျက်နှာမော့ကြည့်ပြီးရီပြတဲ့ ပီတီကဘာနဲ့မှမလဲနိူင်အောင်ကြည်နူးမိတယ် ကိုယ့်မိဘနေရာရောက်မှ သားသမီးတေွအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားကိုပိုပြီးနားလည်လာတယ် တစ်နေ့တစ်နေ့သားသားရဲ့တတ်သိလာတဲ့အမူအရာတေွှကည့်ပြီးကိုယ့်မှာဝမ်းသာအားရဖြစ်မိတယ် မေမေတို့ရဲ့ အတေွ့ကြုံလေးလဲပြန်ဝေမှျပေးပါဦးနော် မသိတာရှိရင် လိုက်နာလို့ရအောင်